Mbariro mhenyu mumhanzi mifananidzo inokukurudzira kose kose pakati Europe, kupa kuuraya nguva panzvimbo yainakidza apo kunwa uye nziyo ndokuyerera vakasununguka nzira. Kana uri kutarisa kuti zvimwe zvemafaro guta panguva yenyu chitima rwendo, tine mamwe mazano. Heano pamusoro yedu 5 mbariro mhenyu mumhanzi zvose pamusoro Europe:
Munhoroondo Shop nderimwe yakanakisisa mbariro mhenyu mumhanzi muFrance. Zviri kunze Bastille Metro yemapurisa. Kwete chete ndizvo nyore kusvika, asi kuri unodziya chaizvo. Kubhawa iri mberi, uye ine chaiyo konzati padanho iri seri vakatozodzokera, with the audience space hidden behind it.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best mbariro Live Music mu Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)